Inzalo ukhathazeke abantu abaningi banamuhla. Bazama ukuthola okuhle kakhulu ngokwabo. Isimo sokunquma zihluke kakhulu: lula ukusetshenziswa, bazizwa yemvelo, ukuphepha impilo, ukusebenza kahle eliphezulu, ngentengo ephansi. Wonke umuntu ekhetha bona.
Naphezu ukhona yesimanje izindlela zokuvimbela inzalo, imibhangqwana eminingi namuhla sebenzisa indlela eliye lasetshenziswa isikhathi eside. Ngakho-ke, ngeke akwazi ukukusiza kodwa ukhathazeke ukuthi kungenzeka ukuba uthole abakhulelwe lapho isidoda, ophazamisekile. Nokho, ngokuqinisekile Le ndlela has eziningi eziwusizo, ukusebenza kahle eliphezulu akuyona phakathi kwabo, kuba% 70 kuphela.
umbono Isazi kanye kobufakazi babantu abasebenzisa ke, abonisa ukuthi ukukhulelwa iphazamisekile lapho isenzo kungenzeka. Ngakho-ke, le ndlela kufanelekile imibhangqwana abangafuni siqambe ukubukeka ingane kubo esikhathini esizayo esiseduze.
Omunye ethile yayo - ukuntuleka isivikelo STD. Ngakho ukuyisebenzisa ucansi nomuntu ezingajwayelekile ngokuphelele bengayi. Kuleso simo, ochwepheshe batusa ikhondomu.
Yiba impendulo omuhle lo mbuzo: "Ngingathola ekhulelwe lapho bezoziphatha okuphazanisayo?" - akulona kuphela ethile yale ndlela. Ongoti bathole ukuthi ukusetshenziswa eside kungaholela ezinkingeni ezingokwengqondo sína besilisa nabesifazane.
Ngokuhamba kwesikhathi, ibhekene frigidity nokuvusa induku. Ngokwezibalo, uhhafu abesifazane abenza le ndlela inzalo, asibi eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Lokhu kungenxa ukucindezeleka ngokwengqondo ngesikhathi socansi, okuyinto evimbela owesifazane ukuba ngehlise umoya futhi kube sekugcineni.
Yena njalo uyacabanga ukuthi kulungile ukwenza umlingani wakhe uma uyabuthola ukhulelwe, ngokuvamile kwenzeka ezingeni esesimweni sokungaphili ngokuphelele. Uma umlingani aluthembekile ke owesifazane asaba kakhudlwana futhi STD.
Ngekusetjentiswa njalo umthetho ophazamisekile sendoda kungaba enkingeni nge ejaculation. Ubona njengento okungafanele esongelayo futhi iyingozi. Uma lokhu ziqala ukwakheka abafanele reflex uxhumano eziholela ekugcineni alibale ejaculation. Ngakho kungase kudingeke isifo wendlala.
Ngaphezu kwalokho, le ndoda futhi njalo ku izinzwane abo esikhundleni uphumule. Kulokhu, ushintsho excitation iza unyathela amabhuleki ezemvelo orgasm imizwa. wephule kakhulu le Neuro-reflex izinqubo eyogcina isiholele iziyaluyalu isimiso sezinzwa esiyinhloko. Ngokuzayo lube nomthelela impotency.
Ukuze lo mbuzo: "Ngingathola ekhulelwe lapho bezoziphatha okuphazanisayo?", I ochwepheshe aphendule ukuthi ematfuba lokukhulelwa ungakapheli unyaka usebenzisa le ndlela imayelana 20-30%. Nokho, kuyinto kakhulu sincike iduna nensikazi nempilo yokuzalana, kanye eziningi nezinye izinto.
muva Ososayensi baye wenza inhlolo-vo. Bacela imibhangqwana ifundelwe ababesebenzisa indlela yokuvimbela inzalo, uqale ukusebenzisa indlela eziqinile. Ngenxa yalokho, izinga lempilo ngokobulili nale mikhaya lithuthukile kakhulu. Abesifazane waqala orgasm, isikhathi amadoda kwaba licace.
Iningi lamadoda ukuthola le ndlela elula kakhulu futhi ephephile. Abesifazane ezithandela ngaphezulu, kungenzeka uthole abakhulelwe lapho uphazanyiswa ukuhlangana futhi kungani? Phela, Uma unganakile zonke kubonakala kuphephile kakhulu, ngoba isidoda ingena esithweni sangasese.
It kuvela ukuthi ingxenye yokuqala, equkethe spermatozoa beshesha kakhulu namanje ingena esithweni sangasese somuntu wesifazane sowesifazane. Amadoda amaningi musa ngisho uzizwe impendulo yabo imizwa kule nkathi.
Ngaphezu kwalokho, ngaphambi ejaculation esithweni sowesifazane labelwe predsemennaya uketshezi lapho isidoda amaseli ingaphinda equkethwe. Ikakhulukazi uma izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ejaculation. Ngisho ukuchama akakwazi ukususa ngokuphelele isidoda esivela urethra.
Ngakho, impendulo yombuzo othi: "Ngingathola ekhulelwe lapho isidoda, ophazamisekile" kusobala. Le ndlela inzalo siyasebenza mayelana 70% kuphela, futhi ayiwavikeli ezifweni ezithathelwana ngobulili, kunomthelela ukuthuthukiswa izifo zocansi kubantu besilisa nakubantu besifazane.
Kungani amehlo zamanzi in namakati? Kungani amakati Scottish noma Persian amehlo amanzi?
Zezindwangu Japanese izandla siqu: schema master ekilasini